Iinyama zebhola ekrimu kunye netshizi yesosi, yummy, yummy! | Ukupheka kweKhitshi
UCarmen Guillen | | Izitya, Ukupheka kwenyama, I-Salsas
Isitya sanamhlanje sinokusebenza njengesokuqala kunye nesesibini ngokudibeneyo, njengoko sisitya esingaguquguqukiyo nesityebileyo kakhulu. Ezi zibhola zenyama ekhrimu nakwisosi yetshizi, enetswele eninzi ngaphambili kunye nomxube wezinongo ezinika incasa ekhethekileyo. Ukuba uthanda ubisi, njengokhilimu kunye netshizi, uyakuyithanda le recipe.
Esi sidlo sityebileyo seebhola zenyama kwi-cream kunye noshizi yesosi ziyakonwabela ezona "zodonga lwendlu".
1 kg yeebhola zenyama ezifakwe isonka
250 ml umhluzi wenkukhu
I-200 ml yekrimu engamanzi
100 ml ubisi olupheleleyo
I-Oregano kunye ne-thyme
Kwipani enkulu yokupanda siyongeza ioyile eyaneleyo yokugubungela iibhola zenyama Fry kubo. Xa zithosiwe, sizibeka ecaleni kwipleyiti kwaye kwipani enye sisusa phantse yonke ioyile, sishiya kuphela okuyimfuneko Qhotsa itswele sele usike wasenza iziqwenga ezincinci.
Nje ukuba yosiwe, Songeza ukhilimu kunye nomhluzi wenkukhu kunye nobisi kwaye uvuse ngoncedo lwecephe lomthi. Okulandelayo sidibanisa kancinci kancinci ukunyibilika kwesonka samasi, ngaphandle kokuyeka ukuxhokonxa… Siza kuyeka ukongeza itshizi de sifumane isosi enobunjani bokungaguquguquki esikufunayo.
Emva kokuba i-sauce ilungiselelwe, sidibanisa iibhola zenyama kwaye siyahamba pheka imizuzu eli-10 Ngaphezulu kobushushu obuphakathi.
Okokugqibela, njengokubamba kokugqibela, siya kongeza oregano kunye thyme kwaye siya kuzama sal.
Ukuhamba nesitya ngasinye unokuqhotsa a iqanda o isikhonkwane iitapile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kwenyama » Iinyama zebhola ekrimu kunye nesosi yesonka samasi